ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပညာဝယ်နှင့် ဗော်လံတီယာများ အကြောင်း”
တချို့ဗော်လံတီရာလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့လဲ ဝေဖန်တဲ့လူတွေကို လာမပြောနဲ့ မကျေနပ်ရင်ကိုတိုင်လာလုပ်ဆိုပြီးပြောတာလဲရှိသဗျ
Thank you very much on your compliment to TP students Thingyan :)
Ex TP student
သူများကို ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်လည်း ဝေဖန်တက်ဖို့ လိုသေးတယ်မဟုတ်လား။ ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြမယ်ဆိုရင် လက်ခံနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး တချို့က ဝေဖန်တယ်ဆိုပြီး သူများရဲ့ မကောင်းတဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ မကောင်းတာတွေ ပဲ ထိုင်ပြောနေတာဆိုရင် ဆဲတာနဲ့တူတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ဝေဖန်တက်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်ကိုပေါရေ။ မာသာထရီဇာ ဆိုရင် သူ့ကိုလာကူတဲ့ ဗော်လန်တီယာတွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်း မမှန်ရင် ပြန်ခိုင်းတာပဲတဲ့။ တချို့သော ဗော်လန်တီယာတွေက စီဗီ ထဲမှာရေးကောင်းရုံအတွက် ဗော်လန်တီယာဝင်လုပ်တာဆိုပဲ။ အဓိက ကတော့စိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ စကားမစပ် အခုနောက်ပိုင်း ကိုပေါရဲ့ပို့စ်တွေက ပိုပြီးကောင်းလာတယ်။ ပထမပိုင်းနဲ့ အခုနောက်ပိုင်း ပို့စ်တွေ ကိုကြိုက်တယ်။ အလယ်ပိုင်း လောက်က နည်းနည်း ရန်စ သလို ရန်လိုနေသလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်မ တစ်ခါမှ ကိုပေါကို ကွန်မန့်မပေးဘူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်းစာတွေက တော်တော်လေးကို ဖတ်ရတာသဘောကျစရာကောင်းလာတယ်။ ပထမပိုင်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေကလည်း ကောင်းတာပါပဲ။
ပို့စ်ကို ဥပမာလေးတွေနဲ့ စထားပုံလေးတွေက ဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ပို့စ်တွေများများရေးနိုင်ပါစေ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ကို မေ့နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... :)
ဤပိုစ့်လေး အလွန်ကောင်း၏။ မြန်မာတွေယုံကြည်ချက်နည်းပီး တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် ဖြစ်သွားခဲ့တာ ကြာပါပေါ့လား။ Confidence တွေနည်းနေတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ အရာရာတိုင်းမှာပေါ့။ ဘယ်လိုပြုပြင်ရပါ့။ ကျနော်ကို အကြံညဏ်လေးများ ပေးကြပါအုံး။
ဒီကိစ္စကတော့အမှန်ပဲဗျို့..တခါတခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းမဲ့မိတယ်ဗျ.. ဥပမာ-ကျွန်တော်လမ်းပြကြယ်မှာထိုင်တော့ အချိန်မှီမဖွင့်နိုင်တာတို့ စာအုပ်တွေကိုစနစ်တကျပြန်မထားနိုင်တာတို့ရှိလာရင် ငါလဲတတ်နိုင်သလောက်လုပ်တာပဲဆိုပီး စိတ်ဖြေတတ် တယ်.. မကောင်းမှန်းသိပါတယ်.. ပြင်ဖို့တော့ ကြိုးစားတုန်းပဲဗျို့ :D.. ကိုယ့်အဖြစ်ကိုသတိထားမိလို့ ဒီပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးပါ..
တော်၏လျော်၏ = တော်ရုံသင့်ရုံ
ကိုပေါ တော်အိလျော်အိ လို့ ရေးတာ မှားနေတယ် ထင်လို့ပါ..
ဟုတ်တယ် ။ တို့လဲ မပြောချင်ဘူး အသစ်ကလေးပါ ခွင်လွတ်ကြပါ။ အဲသလိုမပြောချင်. နိုင်သလောက်လုပ်မယ်။ မှားလဲမှားတဲ့အလျောက်ပေါ့။
ရွှန်းမီ.... ထောက်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် အခု စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာ ပြန်ကြည့်တော့....
တော်ရိလျော်ရိ လို့ ရေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြင်လိုက်ပါမယ်။
ကိုကြီးပေါ ခုနောက်ပိုင်းရေးတာလေးတွေ Reasonable ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သဘောကျနေတာ ဒီတစ်ခုမှာတော့ ဖြူတုတ်နဲ့ သဘောနဲနဲလွဲနေတယ်။
Volunteer အကြောင်းကနေစရရင် ... များသောအားဖြင့် စိတ်အားထက်သန်၍ ကိုယ့်မှာအချိန်ပို၍ လုပ်ကျတာများပါတယ်။ (ကိုကြီးပေါ ပြောသလို လူစားအနည်းငယ်တော့ ရှိကြပါတယ်။) အပြုသဘောနဲ့ ကောင်းအောင် လာပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုရင် လေသံကိုနားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ အရမ်းသိသာပါတယ်။ ဘယ်စဉ်းစားဉာဏ် ရှိသူကမှ ဘုတောလွှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆီလိုအပေါက်ရှာပြီး လာဆရာလုပ်တဲ့ လေသံဆိုရင်တော့ ပုထုစဉ်လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ တခုခုတော့ ပြန်ပြောမိမှာပါပဲ။ ယဉ်ကျေးချင်လို့ ပြောတိုင်:ငြိမ်နေရင်လည်း 'အ'တယ်လို့ ထင်ချင်ကြသေးတယ်။
ရှေ့ဆက်ရရင်...American Idol နေရာမှာတော့ ကိုကြီးပေါ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်သွားသလားလို့။ ရံပုံငွေအတွက် ဖျော်ဖြေသူနဲ့ American Idol & Britain Got Talent ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြရာမှာ Apple to Orange ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့အတွက် ဘယ်contestant ကမှတော့ ကိုယ်ဘယ်လိုအားနည်းနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်လေ့ရှိတယ် မထင်ပါဘူး။ ကိုကြီးပေါ 'ဆိုကြမယ်ပျော်ကြမယ်' တို့၊ 'အခုနောက်ပိုင်းမင်းချစ်သူတို့Judgeလုပ်တဲ့အဆိုပြိုင်ပွဲ' တို့ ကြည့်မိလားမသိဘူး။ ဖြူတုတ် သိသလောက်တော့ ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မှ ပွဲမစခင် မတောင်းပန်ပါဘူး။ (ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ယဉ်ကျေးမှူ မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ) ဒါက ပြိုင်ပွဲ to ပြိုင်ပွဲ နှိုင်းယှဉ်ပြတာ။ အဲဒါမှလည်း တရားမျှတရာ ကျတော့မှာပေါ့။ ရံပုံငွေပွဲတွေမှာ ကြိုပြီးတောင်းပန်ခြင်းကတော့ သူတို့မကျွမ်းကျင်ရာမှာဝင်လုပ်ကြတော့ တတ်သိနားလည်ပြီးသား ပညာရှင်ကြီးတွေကို စော်ကားသလိုမဖြစ်ချင်လို့ လို့ပဲထင်ပါတယ်။ အဲဒီယဉ်ကျေးမှူကို ပျောက်စေချင်တဲ့ ကိုကြီးပေါရဲ့ Wishကိုတော့ ဖြူတုတ်မကန့်ကွက်လိုပါဘူး။
Ko Paw..... the Burmese amateur normally says such things before the show which cannot be translated always asaperson with no self confidence who begs for the sympathy vote from the audience. Isn't it possible that he/she is just humble when it comes to performing on stage at fund raising show or charity.I do not think that it'sabad habit. Of course it's up to the individual who would think whatever one wants.
For the professionals, no excuse if they did not rehearse well with the band in advance. I can only understand that they have to sing the songs, which are not included in their programs upon the request of the fans. That happens quite often in Burma provided the ban has notes. Well.....they have to accomodate the fans as much as they can within the limited time if they want to maintain their popularity.
I am only talking about the Burmese professional vocalists.